विप्लवका दाइलाई अदालतले छाड्यो, प्रहरीले समात्यो -
विप्लवका दाइलाई अदालतले छाड्यो, प्रहरीले समात्यो
१५ असार २०७७, सोमबार २०:५८ 174 पटक हेरिएको
दाङ । ९ महिनाभन्दा बढी समयदेखि थुनामा रहँदै आएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’का सहोदर दाइ चन्द्रबहादुर चन्द ‘वीरजंग’लाई सोमबार दाङ जिल्ला अदालत उपस्थित गराइएको थियो।
सरकारद्वारा प्रतिवन्धित पार्टीका एक वरिष्ठ नेता (केन्द्रीय सदस्य) मध्यपश्चिम कमाण्ड इन्चार्ज रहेका वीरजंगलाई अदालतले १५ हजार धरौटीमा छोड्ने आदेश दियो।
अदालतले मागेअनुसार धरौटी बुझाएर छुटे पनि गेटबाहिर जान पाउँछन् कि पाउँदैनन्? भन्नेमा एक प्रकारको कौतुहलता थियो। ‘हामी परिवर्तनका पक्षधर हौं। देश र जनताको हितका लागि क्रियाशील छौं। तर, सरकारले पटक/पटक आफूहरुलाई गलाउन सकिन्छ कि? भनेर दुःख दिने काम गर्दै आएको छ,’ पत्रकारसँग केही समय बाेलेका उनले भनेका थिए ‘सरकारले आफैले निर्माण गरेको कानुनको आफै धज्जी उडाउने काम गर्दै आएको छ।’
एउटै विषयमा पटक/पटक मुद्दा लगाउने र ठाउँ ठाउँमा लैजाने कार्य निरंकुशताको पराकाष्ट भएको उनले दाबी गरे। उनले त्यो बोलिरहँदा वरिपरि प्रहरी हतियारसहित तैनाथ थिए। दिउँसो साढे ४ बज्नै लाग्दा उनी जिल्ला अदालतबाट बाहिर निस्कन खोजे। उनी अदालत परिसरबाट निस्कनै खोज्दा पुनः प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका ‘वीरजंग’लाई संगठित अपराधसम्वन्धी मुद्दा प्रहरी प्रशासनले लगाएको छ।
‘उहाँविरुद्ध राज्य विरुद्धको संगठिक अपराधमा काभ्रे जिल्लामा मुद्दा छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने ‘ त्यसैले उहाँलाई सोमबार नै दाङदेखि काभ्रे पठाइएको हो।’
‘बीरजंग’ गत असोज ३० गते राति नेपाल–भारत सीमा नाका अन्तर्गत दाङको राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ४ को मुग्रेठाबाट पक्राउ परेका थिए।
राप्ती व्यूरोको बैठक चलिरहँदा प्रहरीले घेरा हालेर ‘वीरजंग’सहित समूहका २१ जना नेता/कार्यकर्ता पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका अन्य सबैजना विभिन्न समयमा अदालतको आदेशपछि रिहा भइसकेका छन्।